बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ? घरेलु यी खानेकुरा खानुहाेस् | Suvadin !
यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रियहरुले सन्तुलित ढंगबाट आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा वान्ता हुने समस्या आउँछ। कतिपय मानिस अाैषधिकाे प्रयाेग गर्छन्। तर, त्याे मेडिसियन अाैषधि प्रयोग गर्दा हाम्राे शरिरमा असर पर्ने भएकाले घरेलु अाैषधि प्रयाेग गरेकाे नै राम्राे हुन्छ।
काठमाडाैं, ८ भदाै – सवारी साधनमा यात्रा गर्दा धेरैलाई रिंगटा लाग्ने र वान्ता हुने समस्या हुन्छ। अझ पुरूषलाइ भन्दा धेरै महिलालार्इ वान्ता हुने गर्दछ।
यदि तपाँइलार्इ यात्रा गर्दा त्यस्ताे हुन्छ भने जामुनको फल र यसका पातहरुमा वान्ता रोक्न सक्ने औषधीय गुण हुन्छ। यात्राको बीच–बीचमा अलि अलि रस पिउँदा पनि वान्ता हुँदैन।
काँचो आँपले खानामा रुची लगाउँछ, खाना पचाउन सहयोग गर्छ। त्यही आँपको पातले वान्ता रोक्ने काम गर्छ। त्यस्तै ल्वाङ्ग, सुपारि मुखमा राखेर चुसेर यात्रा गर्दा पनि वान्ता हुने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ।
सुपले पनि वान्ता रोक्ने काममा मद्दत गर्छ। याे पनि यात्राका क्रममा मुखमा राखेर चपाइरहँदा वान्ता हुँदैन। त्यस्तै अदुवामा पनि वान्ता रोक्ने औषधीय गुण हुन्छ। यसरी यात्राका क्रममा अदुवाका टुक्रा मुखमा राखेर चुसिरहँदा वान्ता हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।
त्यस्तै गाडिमा यात्रा गर्दा गाडि गनाउने भएकाले माक्स वा कुनै रूमालले मुख छाेपेर निदाएमा पनि बान्ता हुन कम हुन्छ।